I-Sports Grass, Sports Turf, Sod Grass Mat - Wanhe
I-Wanhe Grass ingumkhiqizo we-Intanethi wobuchwepheshe obudidiyela ohlanganisa i-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa futhi uzibophezele ekubeni ngumhlinzeki wesevisi omuhle kakhulu womkhiqizo nokwenziwa emkhakheni wotshani bokuzenzela. IHuai'an Wanhe Industry and Trade Co, Ltd. itholakala eBhange laseBeijing-Hangzhou Grand Canal enezindawo ezinhle. Idolobha lakubo laseZhou Enlai, indoda enkulu yesizukulwane, iDolobha laseHuai'an, esifundazweni saseJiangsu. I-Xinchang Railway neBeijing-Shanghai Expressway badlula edolobheni ngokuhamba okulula. Imikhiqizo eyinhloko ngotshani bezemidlalo kanye ne-landscape grass neminye imikhiqizo ngefektri yethu. Sisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside futhi obuzinzile nabathengisi abaningi nama-ejenti kule minyaka engama-20 edlule Ukuthunyelwa kwamanye amazwe kube ngaphezu kokuthengisa okungu-80%.
I-Wanhe Grass landscape yegalufu yenzelwe futhi yenziwa ngokusho kokuhlangenwe nakho kwangempela okuluhlaza, okunikeza ubuqiniso obungenakuqhathaniswa ngokubukeka komhlaba nokusebenza kwayo. Ubushelelezi bayo obuhle buqinisekisa ukuqina kwebhola okuqondile futhi kunikeza induduzo ejabulisayo ngenkathi idlala kuyo.
Okuhlangenwe nakho kukaWanhe Grass kokudala i-turf yokufakelwa yezemidlalo eminingana kusivumela ukuthi sinikeze imikhiqizo esebenza kahle yokusetshenziswa kwezinhloso eziningi, njengenkundla yebhola lezinyawo eziyi-11 no-7-a-side, inkundla yebhola le-hockey nenkundla yebhola le-rugby .
Uyazi ukuthi abathengi abaningi ngokwengeziwe bathenga utshani bokuzenzela ezitolo zakwa-Chain Stores noma ze-DIY? Kungumkhiqizo omusha oshisayo othengiselwa abantu ku-DIY. I-Wanhe Grass Landscape ingene kwezinye zezitolo ezaziwa kakhulu zeChain futhi igcwele ulwazi lokuhlinzeka izitolo zamaketanga ngezinketho ezahlukahlukene: roll 2X25m, roll 1x4m, mat 1X1m, pad 30X30cm.
Ngisebenza noWanhe iminyaka emihlanu ngotshani. Utshani bangempela! Ngiyisebenzisela amaphrojekthi wami we-landscape futhi ngithola impendulo enhle evela kumsebenzisi wokugcina, futhi ngithola ibhizinisi elihle nempumelelo. Ngiyabonga Iqembu le-Wanhe Grass. Ngingawuncoma lo mkhiqizo!
Uma ucabanga ukukuthengela lokhu, ngeke udumazeke. Unotshani bangempela obuzwa utshani obugcwele futhi obusebenzisa isikhathi eside.Ungumkhiqizo omuhle wentengo enkulu futhi usebenza kahle!
Iqinile kakhulu futhi yenziwe kahle. Inezindawo ezimbili zokushaya ezihluke kakhulu ukwengeza ubuqiniso. Ikhwalithi ephezulu! Umkhiqizi omuhle! Azikho izingqinamba ngomkhiqizo nhlobo. Lokhu nje bengikufuna. Usayizi ophelele wawo wonke amakilabhu ami.
EMexico - u-Antonio
Umkhiqizi onconywe kakhulu! Ukulethwa okusheshayo. Ikhwalithi yomkhiqizo muhle, utshani buthambile futhi buyiqiniso. Izinto zephakheji nazo zihle kakhulu. Banekhwalithi ephezulu futhi amandla okukhiqiza abekelwe thina ngoba siyazi ukuthi i-alwasy ingasinikeza isisombululo. Iqembu labo lokulayisha kanye nokuthengisa kusebenza kakhulu. Kunconyiwe.
EJapan - な か だ
Utshani obenziwe ngobungcweti obuhlaza botshani bendawo. Umthengisi ubenobungcweti futhi eshesha ukuphendula imibuzo. Inkampani iyonke ibonakala iqondiswe kakhulu kumakhasimende. Ngingancoma kakhulu ukwenza ibhizinisi ngalo mthengisi futhi esikhathini esizayo.
USA - UGarret
Umkhiqizo wekhwalithi enhle kakhulu, kanye nensizakalo enobungani kakhulu, inkampani enobuchwepheshe kakhulu. Siyabonga Wanhe Grass, sizobambisana maduzane.
OKUSHIWO AMAKlayenti ethu
Inkundla yebhola lezinyawo i-Astro Turf, Utshani Bokubeka Indawo Ngokuhleleka Kwendawo, Ibhola le-Turf Grass, Utshani Lokuzenzela, Mbumbulu Utshani Carpet, Utshani Begalofu Lokufakelwa,